Sony nwere ike ọ gaghị esonye na ahụmịhe ọtụtụ ihe ọtụtụ Akụkọ akụrụngwa
Sony nwere ike ọ gaghị esonye na ahụmịhe obe nke Minecraft
Naanị ụbọchị ole na ole gara aga, na nzuzo nke E3 2017, nnukwu ụlọ ọrụ Microsoft mara ọkwa ihe nwere ike ịbụ mmelite kachasị ukwuu akwadoro maka egwuregwu a ma ama. Minecraft. N'okpuru aha "Ka mma ọnụ" (mma ọnụ), Minecraft ga-amaba n'ime ahụmịhe cross-platform nke ga-eme ka ndị egwuregwu nwee ike ịga n'ihu egwuregwu ahụ n'otu ngwaọrụ site na ebe ha hapụrụ na nke ọzọ.
A nabatara ozi a, yana akụkọ ndị ọzọ na mmelite ndị ọzọ akpọrọ, nke ọma na mpaghara ahụ dum, site na ndị egwuregwu ruo ndị nkatọ na mgbasa ozi pụrụ iche, agbanyeghị, ọ dị ka Sony nwere ike ịjụ isonye na ahụmịhe cross-platform Minecraft, nke ga - eme ka ọtụtụ ndị egwuregwu "pụọ n'egwuregwu".
Minecraft agaghị adị ka ikpo okwu dịka anyị chere
Egwuregwu a ma ama Minecraft, n'aka Microsoft ebe ọ bụ na ọ weghaara ụlọ ọrụ na-ahụ maka ya afọ atọ gara aga (Mojang), ọ bụ mgbe niile ka ọ bụ otu n'ime ndị isi na-akwado E3, na afọ a ọ dị okpukpu abụọ, ọ bụ ezie na, ọ dị mwute, ọ nwere ike ọ gaghị masịrị onye ọ bụla.
Companylọ ọrụ na-arụ ọrụ ọtụtụ afọ Minecraft ghọọ egwuregwu zuru ụwa ọnụ, na-eweta ebe niile, site na consoles na desktọọpụ na ngwaọrụ mkpanaka yana, n'oge na-adịbeghị anya, dịkwa na eziokwu nke mebere ugbu a. Agbanyeghị, n'ime usoro a niile ọhụụ pụtara ìhè: anaghị egbochi ụdị egwuregwu ọ bụla na nyiwe ọ bụla.
Ọ dabara nke ọma, mmachi a ga-apụ n'anya yana mmelite ndị "Better To Tare" ga-enwe ike soro ndị enyi gị gwuo egwu ma bulie ebe ha kwụsịrị n'agbanyeghị usoro ikpo okwu ha nọ na ya. Ọfọn, nke a bụ ihe anyị kwenyere na mbụ n'ihi na o doro anya na ndị nkwekọrịta dakọtara ga-abụ naanị ndị ahụ bụ akụkụ nke Nintendo Switch na XBOX ebe ọ bụ na, dị ka ekpughere n'etiti gam akporo Central, Sony jụrụ imeghe netwọk ya ma sonye na njem obe-ikpo okwu nke Minecraft.
N'oge a enweghi ihe kpatara ya, ọ bụ ezie na a na-eche na ọ ga-abụ maka okwu asọmpi, yana nke ahụ Sony na-elekwasị anya na ahụmịhe egwuregwu na ọtụtụ egwuregwu maka PS4 na PC. N'ezie, n'oge E3 2017 Sony gosipụtara ihe dị ịtụnanya ndepụta nke egwuregwu ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Sony nwere ike ọ gaghị esonye na ahụmịhe obe nke Minecraft
Arilọ ọrụ a ma ama Atari na-arụ ọrụ na njikwa egwuregwu vidiyo ọhụrụ